2011 | ကြယ်ရောင်မှတ်စု
အိမ်ရှေ့မြေကွက်လပ်တွင် ဆော့ကစားနေသော သားလေးဖိုးထွန်းကို ကိုမြင့်ဝေတစ်ယောက် ငေးကြည့်နေမိသည်။ သားလေးဖိုးထွန်းတောင် ဒီနှစ်ဆို ငါးတန်းတက်ရတော့မည်ပဲ။ ဖိုးထွန်းက စာတော်သည်မဟုတ်ပေမယ့် စာညံ့သည့်အထဲတွင်တော့ မပါပေ။ လက်ရေးလေးတွေဆိုလည်း သူသင်ထားသည့်အတိုင်း ဝိုင်းစက်နေအောင် ရေးနိုင်သည်။ သားနဲ့ရွယ်တူတွေထဲမှာတော့ ဖိုးထွန်းလေးက လက်ရေးအလှဆုံးဟု ပြောရမည်။ ထို့ကြောင့်လည်း သားရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ သူတတ်နိုင်သလောက် အစွမ်းကုန်ပံ့ပိုးပေးသည်။
ဟိုနေ့ကပဲ သားအတွက် စာရေးကိရိယာတွေ၊ ကျောင်းအိင်္ကျင်္ီတွေ သူဝယ်လာတော့ မိန်းမလုပ်သူက “တော်ကလည်း ခုမှ နွေရာသီကျောင်းစပိတ်ရုံရှိသေးတယ် အဖြစ်သည်းလိုက်တာလွန်ရော….” ဟု မှတ်ချက်ပေးနေသေးသည်။ အထုတ်တွေပွေ့ပြီး လမ်းထဲကို ဝင်တော့လည်း လမ်းထိပ်ဈေးဆိုင်က ဒေါ်သောင်းက “မြင့်ဝေတို့အထုတ်ပိုက်ရင် ဖိုးထွန်းအတွက်မှ ဟုတ်ပါလေစ…” ဟု ပြောသေးသည် ။ ပြောချင်တာသာ ပြောကြပါစေ.... ကိုမြင့်ဝေကတော့ သူ့သားမှ သူ့သား။ သားကို ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်စေချင်သည်။ လူကြီးမိဘတွေကို ရိုသေလေးစားတတ်သော သားတစ်ယောက် ဖြစ်စေချင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သူ့သားသည် စံပြတစ်ယောက် ဖြစ်စေချင်သည်။ ဒါတွေသည်ပင် သူ့ဘဝရဲ့ အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒတွေ ဖြစ်သည်။
ကိုမြင့်ဝေ သားဖြစ်သူကို လှမ်းခေါ်လိုက်သည်။
“ဗျာ…ချစ်ဖေ….” ဟု ထူးကာ ဖိုးထွန်းတစ်ယောက် အနားသို့ ရောက်လာသည်။
ဖအေနှင့်သား အခေါ်အဝေါ်တွေက သူသင်ထားသည့်အတိုင်းပဲဖြစ်သည်။ အဖေချစ်သောသားနှင့် သားချစ်သောအဖေ ဆိုတာကို သူတော်တော်နှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ဒီအခေါ်အဝေါ်တွေကို သူကိုယ်တိုင် သင်ထားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်က တီးတိုးပြောကြသံတွေကို သူပြန်ကြားရသည်။ ပထွေးနှင့် မယားပါသားတွေထဲမှာတော့ ဒီသားအဖက စံပြပဲဟု ဆိုကြသည်။
ဟုတ်ပါသည် သူသည် ပထွေးတစ်ယောက်ပင် ဖြစ်သည်။ မလှဝင်းနှင့် အကြောင်းပါတော့ သားလေးက တော်တော်ငယ်သေးသည်။ မလှဝင်းကို သူချစ်မြတ်နိုးသည်။ အရင်အိမ်ထောင်နှင့် အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် ကွဲခဲ့ရတော့ သူတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ သားတစ်ကောင်နှင့် တို့လို့တွဲလောင်းဟုပင် ဆိုရမည်။ အရင်အိမ်ထောင် ကိုဘမောင်က တော်တော်ဆိုးသည့် စာရင်းတွင် ပါဝင်ပေသည်။ အရက်ကိုးမောင်းသောက်၍ ရမ်းသည်။ စာရိတ္တကလည်း မကောင်း။နောက်တော့ ကွဲကြကွာကြတွေ ဖြစ်ကုန်သည်။ ကိုဘမောင်က ရွာပြန်သွားပြီး သတင်းအစအနပင် မကြားရတော့။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ သူနှင့်မလှဝင်း အကြောင်းပါသည်။ သားလေးအတွက် သူတို့ တော်တော်လေး ဆွေးနွေးဖြစ်ကြသည်။ ဖိုးထွန်းလေးကို မြင်ကတည်းက သူသနားစိတ်ဝင်မိသည်။ သားအရင်းကဲ့သို့ပင် ချစ်ခင်မိသည်။ သူကိုယ်တိုင်သည်လည်း ကလေးယူနိုင်ပါလျှက်နှင့် သူ့သွေးကို မယူဖြစ်လောက်အောင်ကို ဒီသားလေးတစ်ယောက်နဲ့ပဲ သူတို့ဘဝကို အဆုံးသတ်လိုက်ကြသည်။
ဒေါ်လှဝင်းတစ်ယောက် ဖိုးထွန်းကို ခေါ်လိုက်သည်။
အမေခိုင်းလို့သာ သွားရသည်..... ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီမိန်းမကြီးဆိုင်သို့ သူမသွားချင်။ သူသွားလျှင် ဒေါ်သောင်းက ဘာတွေ မေးမှန်းမသိ။ မင်ချစ်ဖေနဲ့ မင်းအမေ အဆင်ပြေရဲ့လားတို့၊ မင်းအဖေက မင်းကို ရိုက်လားတို့ စုံနေတော့သည်။ သူစဉ်းစားမိသည်မှာ ဘာ့အတွက်ကြောင့် သူ့ချစ်ဖေက သူ့ကို ရိုက်ရမည်နည်း။ သူ့အမေနှင့်လည်း အဆင်ပြေနေပါလျှက် ဘာတွေ မေးမှန်းမသိ။ သူ့သူငယ်ချင်း ဖိုးငယ်ကတော့ အဲဒီမိန်းမကြီး စကားနားမထောင်နဲ့ ဟု ပြောတတ်သည်။
ဖိုးငယ်က သူ့ရဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်။ အတူသွား၊ အတူစား ညီရင်းအစ်ကိုလို နေကြသည်။ ဖိုးငယ်အိမ်လာလျှင် သူပျော်သည်။ အိမ်လာလျှင်လည်း ချစ်ဖေနှင့်ချစ်မေက ဖိုးငယ်ကို ထမင်းစားပြီးမှ ပြန်ခိုင်းတတ်သည်။ ဖိုးငယ်ပြန်မည်ဆိုလျှင်လည်း တိုးတိုးတိုးတိုးနှင့် ဘာတွေပြောနေကြမှန်းမသိ။ သူမေးကြည့်တော့ ဖိုးငယ်က မင်းအကြောင်းတွေပဲ မေးတာပါကွာ ကျောင်းမှာစာလိုက်နိုင်လား ဆော့နေသလားဆိုတာတွေမေးတာ ဟုပဲ ပြန်ပြောတတ်သည်။
အဲဒါတော့ ဟုတ်မည် ထင်သည်။ ချစ်ဖေက သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို တွေ့တိုင်း သူ့အကြောင်းတွေ မေးတတ်သည်။ ချစ်ဖေက သူ့ကို အလွန်ချစ်သည်။ ဒါကိုတော့ သူလည်း သိပါသည်။ သူဘာကစားနည်းပဲ ဆော့ဆော့ ချစ်ဖေက မဆော့ခိုင်းဘူး ဟူ၍ မရှိပေ။ ဘယ်လိုဆော့ရင်ကောင်းသည်ဟုသာ ပြောပြတတ်သည်။ နောက်ပြီး ချစ်ဖေက သူ့ကို အိမ်ဆောက်နည်းတွေ၊ ကားလုပ်နည်းတွေ၊ ဇက်လုပ်နည်းတွေပါ သင်ပေးတတ်သည်။ ချစ်ဖေ ဘယ်ကယူလာမှန်း မသိသော ဖော့တုန်းကြီးတွေကို ဇက်ပုံရအောင် လှီးဖြတ်ကြသည်။ တစ်ခါတစ်လေ မြစ်ကမ်းစပ်မှာ ရပ်ထားသော ဇက်ကြီးတွေကို သွားကြည့်ကြ၊ အိမ်ပြန်ရောက်လျှင် ဖော့တုံးတွေကို လှီးကြဖြတ်ကြနှင့် အလွန်ပျော်ဖို့ကောင်းသည်။
မှတ်မှတ်ရရ တစ်နေ့ သူနှင့်ဖိုးငယ် လှီးထားတဲ့ ဖော့တုံးတွေကို ဆက်ပြီး ဇက်ကြီးတစ်ခုနှင့် ပုံစံတူ ရခဲ့သည်။ ထိုအခါ သူက ဖိုးငယ်ကို “ငါတို့ ဇက်တော့ပြီးပြီကွ ဒါပေမယ့် ငါတို့ဇက်က စက်လည်းမပါဘူးနော် …” ဟု ပြောလိုက်မိသည်။ အဲဒါကို ကြားသွားသော ချစ်ဖေက ဘီဒိုပေါ်က ကက်ဆက်ကို သွားယူကာ အဖုံးတွေ ဖွင့်ပြီး တစ်ခုခုကို ဖြုတ်ယူနေတော့သည်။ သူနှင့် ဖိုးငယ်လည်း ထိုင်ကြည့်နေမိသည်။ နောက်တော့ ချစ်ဖေက ကက်ဆက်ထဲက မော်တာသေးသေးလေးကို ထုတ်ယူပြီး ဘောပင်မှင်ချောင်းနှင့် လုပ်ထားသော ပန်ကာလေးကို တတ်ကာ ဖော့တုံးနဲ့လုပ်ထားသောဇက်မှာ ဓါတ်ခဲနှင့်တွဲပေးလိုက်တော့ သူတို့ရဲ့ ဇက်ကြီးက ပိုလို့ အသက်ဝင်သွားတော့သည်။ ချစ်မေကတော့ ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်နှင့် ပြောမဆုံးတော့ချေ။ ထိုအခါချစ်ဖေက မိန်းမရာ ဒီသားလေးအတွက်ပဲကွ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါတို့တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးရမှာပေါ့ ဟုပင် လှမ်းပြောနေသေးတော့သည်။ ထို့နောက် ဇက်ကြီးကိုကိုင်ကာ သူတို့လမ်းထိပ်ရေအိုင်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ လမ်းရောက်တော့ ဖိုးငယ်က မင်းချစ်ဖေက မင်းကို တော်တော်ချစ်တာပဲကွ ငါ့အဖေ ငါ့ကို အလိုလိုက်တာထက်ကို ပိုသေးတယ် ဟုပြောသည်။ သူလည်း သိပါသည်။ ချစ်ဖေကို သူလည်း ချစ်သည်ပဲလေ။
ဒီလိုနဲ့ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွေပြီးတော့ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ပြီ။ သူနှင့်ဖိုးငယ်က တစ်ခုံတည်း အတူတူ ထိုင်ကြသည်။ ခုံရဲ့အစွန်မှာတော့ အောင်အောင်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးထိုင်သည်။ အောင်အောင်က စာတော့တော်သည်။ ဒါပေမယ့် အိမ်စာပေးလိုက်တိုင်း ပြီးအောင်လုပ်လာသည် ဟူ၍ မရှိ။ အမြဲတန်း ဆရာမရိုက်တာ ခံရသည်။ သူမေးလျှင်လည်း ဟုတ်တိပတ်တိ ပြန်မဖြေ။ ဖိုးငယ်ကတော့ ဘာမှ သွားမေးမနေနဲ့ ဟုပြောသည်။ သူမေးနေတာ တွေ့လျှင်လည်း ဖိုးငယ်က သူ့ကို စကားလမ်းကြောင်းလွဲအောင် လုပ်ပစ်တတ်သည်။ ဒီလိုနှင့် သူလည်း သိပ်မမေးဖြစ်တော့။
ပထမတော့ အောင်အောင်က ကျောင်းမှန်နေသေးသည်။ စာသင်ချိန် တစ်လကျော်ကျော်လောက်မှာတော့ ကျောင်းပျက်လာသည်။ တစ်နေ့တော့ အောင်အောင် ကျောင်းကို နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာသည်။ မျက်နှာမှာလည်း ဖူးယောင်လို့ နေသည်။ သူက မေးကြည့်တော့ ဘာမှမပြော။ နောက်တော့ သူ မရမကမေးမှ အောင်အောင်က ပြောပြသည်။ သူ့အဖေ ညက ထိုးလိုက်တာတဲ့။ ဘာလို့ မင်းအဖေက မင်းကိုထိုးတာလဲဆိုတော့ သူ့အမေနဲ့ရန်ဖြစ်ရာက သူဝင်ဆွဲတော့ သူ့ကိုပါထိုးတာဟု ပြောသည်။ နောက် အောင်အောင်က ဆက်ပြောတော့သည်။ သူ့အဖေဆိုတာ တကယ်က သူ့အဖေအရင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ သူ့အမေနှင့် စကားများရန်ဖြစ်တာ နေ့တိုင်းလိုလိုပဲ ဖြစ်ကြောင်း၊ သူ့ကိုလည်း တစ်ခါတစ်ခါ မထင်ရင် မထင်သလို ရိုက်တတ်ကြောင်း၊ ကျောင်းကပေးလိုက်သော အိမ်စာတွေကိုလည်း ပြီးအောင်လုပ်လို့ မရကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောပြလေတော့သည်။ အဲဒါကြောင့် အောင်အောင်က သူ့အဖေအရင်းရှိသော ပြည်မြို့သို့ လိုက်သွားတော့မည်။ သူ့အဖေ ဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာ သူသိပြီဖြစ်လို့ လိုက်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီဟုလည်း ဆက်ပြောသည်။ ထို့နောက်တော့ အောင်အောင်တစ်ယောက် ကျောင်းသို့ လုံးဝမလာတော့ချေ။ သူ့အဖေရှိသော ပြည်သို့ လိုက်သွားပြီဟု သူသိလိုက်ရသည်။ ထို့အတူ ပထွေးဆိုတာကြီးကိုလည်း သူစိတ်မှာ တော်တော်မုန်းသွားမိတော့သည်။
ဒီလိုနှင့် သူရော ဖိုးငယ်ပါ အောင်အောင့်ကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်သွားကြပြန်သည်။ တစ်နေ့တော့ သူနှင့်ဖိုးငယ် ကျောင်းဆင်းချိန်တွင် အိမ်မပြန်ပဲ ဘောလုံးဝင်ကန်နေကြသည်။ ထိုစဉ် အရက် မူးနေသော လူကြီးတစ်ယောက် ဘောလုံးကွင်းထဲ ဆဲဆိုပြီး ဝင်လာလေသည်။ ပထမတော့ သူတို့တွေ ကြောင်ပြီး ရပ်ကြည့်နေမိသည်။ နောက်တော့ ထိုလူကြီးက ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ သူတို့နဲ့အတူ ကစားနေသော ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ခြေထောက်နဲ့ စကန်ပါလေတော့သည်။ ဟိုကောင်လေး ခွေခနဲ လဲကျသွားတာ ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ နောက် ထိုလူကြီးကပဲ ‘ခွေးမသား အိမ်တန်းမပြန်ဘူး….” ဟု ပြောကာ လဲနေသော ကောင်လေးကို ရိုက်လေတော့သည်။ လေးငါးချက်လောက် အရိုက်ခံပြီးတော့မှ ကောင်လေးခမျာ ထွက်ပြေးနိုင်သည်။ ထိုကောင်လေးနောက်သို့ ထိုလူကြီး ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းကာ ပြေးလိုက်သွားတော့မှ ကောင်လေး၏ ကျောင်းလွယ်အိတ်တွေ ကျန်ခဲ့တာကို သူမြင်ပြီး လွယ်အိတ်တွေ ကျန်ခဲ့ပြီကွ ဟု သူပြောတော့ အတူတူဆော့နေသော ကောင်လေးတစ်ယောက်က ရတယ် ငါယူသွားပေးမယ် အဲဒီကောင်နဲ့ငါနဲ့က အိမ်နားနီးချင်းကွ ဟု ပြန်ပြောသည်။ တစ်ဆက်ထဲမှာပဲ အိမ်နီးနားချင်းဆိုတဲ့ ကောင်လေးက အဲဒါ သူ့ပထွေးလေ အရမ်း အရိုက်ကြမ်းတာပဲ ဟု ဆက်ပြောလေသည်။ အဲဒီအချိန်တွင် ဖိုးငယ်က ကျွန်တော့်လက်ကို ဆွဲပြီး ပြန်ကြရအောင်ဟု ပြောကာ ဘောလုံးကွင်းထဲမှ ထွက်ခဲ့ကြတော့သည်။ သူ့အတွက်တော့ ထိုမြင်ကွင်းသည် ရင်ထိတ်စရာကောင်းလှသည့် မြင်ကွင်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ လူကြီးတစ်ယောက်က ကလေးတစ်ယောက်ကို ဒီလို ရိုက်နှက်တာမျိုးကို သူ့ဘ၀မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် မြင်ဖူးခြင်းဖြစ်သည်။ ပထွေးဆိုတာကြီးက ဒီအတိုင်းကြီးပဲလားဟု တွေးမိကာ အောင်အောင့်ကိုပါ သွားသတိရလိုက်မိလေသည်။
ခုတစ်လော ဒေါ်လှဝင်းတစ်ယောက် စိတ်က သိပ်မကြည်ချင်။ ကျမ်းမာရေးကလည်း တဖြေးဖြေး ချူချာလာသည်။ နှလုံးက အားနည်းလာပြီး ကျောက်ကပ်ကလည်း ပုံမှန်မဟုတ်ဟု ဆရာဝန်က ပြောလိုက်သည်။ ကျမ်းမာရေးချူချာလာတော့ စိတ်က ဘာကိုမှ အလိုမကျချင် ဖြစ်လာသည်။ ကိုမြင့်ဝေ၏ အပြင်စီးပွားရေး တစ်ခုဖြစ်သည့် သမဆိုင်က ပစ္စည်းတွေကို တစ်ဆင့်ပြန်ဝယ်ပြီး ဖောက်သည်ပေးသည့် အလုပ်ကလည်း ပျက်သွားချေပြီ။ သမဆိုင်တွေ ပိတ်လိုက်တော့ ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ချေ။ ကျမ်းမာရေးမကောင်းရသည့်ကြားထဲ စီးပွားရေးကပါ ကျလာသည့် ဒဏ်ကြောင့် ကိုမြင့်ဝေနှင့်လည်း စကားပြောရတာ အပေါက်အလမ်း မတည့်ချင်တော့ပေ။ ပထမတော့ ကိုမြင့်ဝေက ပြန်မပြောပဲ ရှောင်ထွက်သွားတတ်သည်။ သို့သော် သူလည်း လူတစ်ယောက်ဖြစ်လေတော့ မခံနိုင်သည့်အဆုံး ပြန်လှန်ပြောဆိုတာတွေ ရှိလာသည်။ ရိုက်ဟယ်နှက်ဟယ် မရှိပေမယ့် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခွန်းကြီးခွန်းငယ်လေးတွေတော့ ရှိလာသည်။ ကိုမြင့်ဝေလည်း စိတ်ရှုပ်မည်ဆိုတာ သူသိပါသည်။
တစ်နေ့တော့ လင်မယားကြားမှာ တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးသော ရပ်ကွက်ပါ သိလောက်သည့် ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လေတော့သည်။ အဲဒီနေ့က ကိုမြင့်ဝေ အပြင်က ပြန်လာပြီး သူ့ကို ကိစ္စတစ်ခု ပြောပြသည်။ အကြောင်းကတော့ သူယခုအစိုးရအလုပ်က ထွက်ပြီး မလေးရှားကိုသွားမည်ဟု ပြောလာသည်။ သူကတော့ အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးနှင့် သားလေးနောင်ရေးအတွက်ဟု ဆိုသည်။ အဲဒီအတွက် ငွေလေးသိန်းလောက် လိုသည်ဟုလည်း ပြောလေသည်။ ဒေါ်လှဝင်းရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းသည့် မိန်းမနှင့် ခြောက်တန်းအရွယ်ကလေးကို ထားခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားကို သွားမည်။ နောက် စီးပွားရေးက မကောင်းရသည့်ကြားထဲ ငွေလေးသိန်းကို ဘယ်က ရမည်နည်း။ သူဘယ်လိုမှ နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်ရသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်တွေ ပါလာပြီး အိမ်နီးနားချင်းတွေပါ ဝင်ဖျန်ဖြေရသည်အထိ ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ သူလည်း အိပ်ယာထဲလဲသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့သည်။ သားဖိုးထွန်းလေးကတော့ ငိုမဲ့မဲ့နှင့် ဘုရားစင်အောက်မှာ ငုတ်တုတ်လေးထိုင်နေတာကို ကြည့်ပြီး သူဝမ်းနည်းပြီး ငိုသာ ငိုမိနေတော့သည်။
“ဟဲ့ကောင်လေး မနေ့က နင့်အဖေနဲ့နင့်အမေ ရန်ဖြစ်ကြတာ ငါကြားတယ်…. နင့်အဖေက နင့်အမေကို ရိုက်တာနှက်တာတွေ လုပ်သေးလား….”
ဒီဒေါ်သောင်းကြီးကိုတော့ သူတော်တော်အမြင်ကပ်လာသည်။ ချစ်ဖေနှင့် ချစ်ဖေရန်ဖြစ်လို့ စိတ်ညစ်နေကာမှ အလိုက်မသိ လာမေးနေသေးသည်။ ခုလည်း အိမ်မှာ ချစ်မေနေမကောင်း၍ ဟင်းမချက်နိုင်လို့ ဆိုင်မှာ လဖ္ဘက်သုတ် လာဝယ်မိသည်ဆိုကာမှ စပ်စုတာနှင့် တိုးနေတော့သည်။ သူမဖြေချင့်ဖြေချင်နှင့် ဟင့်အင်းဟု ဖြေလိုက်သည်။ ဒေါ်သောင်းက ဆက်ပြီး
“ကောင်လေး ငါ့အနားလာခဲ့ဦး…. ငါနင့်ကို ပြောပြစရာတစ်ခုရှိလို့….” ဟု ပြောသည်။
မျက်လုံးကလည်း ကျီးကြည့်ကြောင်ကြည့်နှင့် ဘာမှန်းလည်း မသိ။ သူမသွားချင်သွားချင်နှင့် အနားကပ်သွားတော့….
“ငါပြောမယ် နင် ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်မပြောရဘူးနော်….. ငါက နင့်အတွက် ပြောပြမှာ…. တကယ်တော့ နင့်ချစ်ဖေဆိုတာ နင့်အဖေအရင်းမဟုတ်ဘူး၊ နင့်ပထွေးဟဲ့ သိလား …..”
သူ့ခေါင်းတစ်ခုလုံး ပွင့်ထွက်သွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်။
“မဟုတ်ဘူး….. ချစ်ဖေက ပထွေးမဟုတ်ဘူး……”
သူ့လက်တွေ ထုံကျင်ပြီး မတ်တပ်ရပ်နေသော ခြေဖဝါးအောက်က ချွေးစေးတွေပါ ပြန်လာသည်။
“နင်မယုံချင်လည်းနေ....ငါက မပြောချင်လို့ ကြည့်နေတာ ကြာပြီ ....အစပိုင်းတော့ ဒင်းက ဟုတ်နေတာကိုး…. ဘာမှမဖြစ်လို့ ငါလည်း ဘာမှ မပြောတာ…… ခုတော့ ပထွေးဇာတိက ပြလာပြီလေ….. နင်သိအောင် ငါက ပြောပြတာ.... နောက်ဆို နင့်အမေကို ဂရုစိုက် ကောင်လေး…. ဟိုအကောင်မြင့်ဝေချယ်လှယ်သလိုသာ ဖြစ်နေရင်တော့ နင့်အမေရော နင်ပါ မလွယ်ဘူးမှတ်……”
ဒေါ်သောင်း ဘာတွေ ဆက်ပြောနေလဲဆိုတာ သူနားမှာ ကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက်။ သူရပ်နေရာကနေ လှည့်ထွက်လာခဲ့မိသည်။ ထို့နောက်တော့ခြေလှမ်းတွေက ဦးတည်ရာမဲ့။ ဦးခေါင်းထဲမှာတော့ ချစ်မေနဲ့ငါ့ကို… ဟုသာ ပဲ့တင်ထပ်နေသည်။ ဘာမှလည်း ဆက်တွေးလို့ မရတော့။
ဖိုးငယ်တစ်ယောက် ခုတလော ဖိုးထွန်းတို့ အိမ်ဘက်ကို သိပ်မသွားဖြစ်တော့။ သွားလျှင်လည်း သူမမြင်ချင်သော၊ မကြားချင်သော မြင်ကွင်းနှင့် စကားသံတွေသာ မြင်နေ၊ ကြားနေရသည်။ ဖိုးထွန်း၏ ပါးစပ်က သူ့အဖေကို အရင်ခေါ်နေကြ “ချစ်ဖေ”အစား “ခင်ဗျားကြီး”ဟု ပြောင်းခေါ်နေပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ညစ်ညမ်းသည့် အသုံးအနှုံးတွေပါ ပါလာတတ်သည်။ သူနှစ်ခါသွားလျှင် တစ်ခါတော့ကြားရစမြဲ။ ဦးမြင့်ဝေ၏ မည်သည့် စကားတစ်ခွန်းကမျှ ဖိုးထွန်းနားသို့ ဝင်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ပြီ။ နောက်ပြီး ဦးမြင့်ဝေ၏ ဖြောင်းဖျမှုတွေ၊ သူ့အပေါ် ဖိုးငယ်၏ အမြင်ဆိုးတွေကို ဖယ်ရှားလို၍ ဖိုးငယ်အပေါ် ပိုမိုဂရုစိုက်မှုတွေ အားလုံးသည် ဖိုးငယ်အတွက် အဆိုးမြင်စိတ်ကို ပိုသည်ထက်ပို၍သာ ဖြစ်လာစေလေသည်။ သူလည်း သူ့သူငယ်ချင်း၏ ပြောင်းလဲမှုကို လက်မခံချင်။ သိုသော်လည်း ဖြစ်လာခဲ့လေပြီ။
သူအစောပိုင်းကတည်းက သိခဲ့ပါသည်။ ဦးမြင့်ဝေတို့မိသားစု၏ ပတ်သက်ပုံကို သိခဲ့ပါသည်။ သူသိသည် ဆိုတာကိုလည်း ဖိုးထွန်းမှလွဲ၍ ဦးမြင့်ဝေတို့ လင်မယားနှစ်ဦးစလုံးကလည်း သိကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူသွားတိုင်း စာသင်ခန်းထဲက အကြောင်းတွေ၊ ဆော့ကစားတဲ့အခါ ကစားဖော်ကစားဖက်တွေရဲ့ အကြောင်းတွေကို ဦးမြင့်ဝေတို့က မေးကြသည်။ သူတို့ စိုးရိမ်မှုသည် ဘာလဲဆိုတာ သူနားလည်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း တတ်နိုင်သ၍ ဖိုးထွန်းကို သူ ထိုလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်မသွားအောင် ဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်။ အောင်အောင်ရော ဘောလုံးကွင်းထဲက ကိစ္စတွေမှာပါ သူတတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားခဲ့သည်။ သူ့မေမေက ပြောသည်။ ဖိုးထွန်းတို့ လမ်းထိပ်က ဒေါ်သောင်းဆိုတာ ဦးဘမောင်နှင့် ရပ်ဆွေရပ်မျိုး.... ထို့ကြောင့် မေမေကပါ ဖိုးထွန်းကို ဒေါ်သောင်းဆိုင်သို့ မသွားစေချင်ကြောင်း ပြောသည်။ ဒေါ်သောင်း၏ စပ်စုမှုတွေ၊ နှုတ်မစောင့်စည်းတတ်မှုတွေကို သူလည်း သိသည့်အတွက် ဖိုးထွန်းကို ဒေါ်သောင်းဘာပြောပြော နားမထောင်နဲ့ ဟု ပြောမိသေးသည်။ မေမေက ပြောဖူးသည်။ ဒီကိစ္စက တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ ဖိုးထွန်းသိသွားမှာပါပဲ ဒါပေမယ့် အသိဥာဏ်နဲ့ စဉ်းစားချင့်ချိန်တတ်တဲ့ အရွယ်ရောက်မှ သိတာက ပိုကောင်းတယ်ဟု ပြောဖူးသည်။ ဒါကို သူလည်း လက်ခံသည်။ ထို့ကြောင့် တတ်နိုင်သမျှ ကလေးတစ်ယောက် အားနှင့် သူကြိုးစားခဲ့ပါသည်။
သို့သော် .....ထိုကလေးတစ်ယောက်သည်လည်း ဘာမျှ မတတ်နိုင်တော့ချေ။ ဖိုးထွန်းရဲ့ အခြေခံစိတ်ဓါတ်ကြောင့်လား၊ ဒေါ်သောင်း၏ စကားသံတွေကြောင့်လား၊ ဦးမြင့်ဝေ၏ စေတနာအမှားတွေကြောင့်လား၊ ဒါမှမဟုတ် ဒေါ်လှဝင်း၏ အတွေးတိမ်မှုတွေကြောင့်လား၊ အောင်အောင်၏ ပြောစကားတွေကြောင့်လား၊ ဘောလုံးကွင်းထဲက ဖြစ်ရပ်ကြောင့်လား…… သူဘာမှ အတွေးတတ်တော့ပါ။ သူသည် ကလေးတစ်ယောက်သာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နောက်ဆုံးတော့ ဖြူနေသော မေတ္တာတစ်ခုကို အရောင်ဆိုးခံလိုက်ရသည် ဟုပဲ သူဦးခေါင်းက အဖြေထုတ်လို့ ရနိုင်ခဲ့လေတော့သည်။
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Friday, November 11, 20114comments
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Friday, September 23, 2011 11 comments
နေသားမကျခဲ့တဲ့ ဘဝထဲက နေ့တစ်နေ့မှာ ကိုယ့်အလံ ကိုယ်ထူပြီး မျက်နှာဖုံးတွေ ရှိတဲ့အရပ် လှမ်းတက်ခဲ့မိတယ်။ ဘဝအစ မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် တွေ့လိုက်ရတဲ့ အရာရာကတော့ အသစ်အသစ်တွေပဲ။ နားလည်ချင်ယောင် ဆောင်ကြတာတွေနဲ့အတူ ဆေးဆိုးပန်းရိုက် နားလည်မှုတွေရယ်၊ ညှီစော်နံနေတဲ့ အပြုံးတွေရယ်က အကြည်ဓာတ်ကို ပြည်ဖုံးကားချကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီအရပ်မှာ တိမ်ထူပြီး လေပူတိုက်တယ်။ အဲဒီအရပ်ဆီကပဲ အမျှဝေသံတွေ ဆူညံတယ်။ တကယ်တော့ ကြက်ဆူပင်တွေရဲ့ လေးတင်သံတွေပါပဲ။ အဲဒီအရပ်ပေါ့ ကန္တာရရဲ့ မာယာနဲ့ အိုအေစစ်အသွင် ဆောင်တယ်။ မျက်နှာဖုံးတွေ ကတဲ့ဇာတ်မှာ ဘဝကို သံစဉ်တူဖို့ စိတ်ကို အခါခါ ပင့်တင်ထားရတယ်။ မျက်နှာဖုံးတွေ အူတဲ့အရပ်မှာ မတူတာတွေ လွှတ်ချနိုင်ဖို့အရေး မနက်ဖြန်ပေါင်း များစွာလည်း စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီးပြီ။
မျက်နှာဖုံးတွေပေါ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အလှဆင်ဖို့ သားကောင်တွေ ချချနင်းတယ်။ နောက်တော့ မျက်နှာဖုံးတွေက မျက်နှာဖုံးတွေ ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ အရာရာဟာ နေသားကျတယ်။ ငါ့ကိုယ်ငါလည်း မိုးလင်းအောင် လုပ်ရဦးမယ်။ အဲဒါကြောင့် မိုးလင်းတာကို ထိုင်စောင့်တယ်။ မိုးက ဖြတ်ခနဲ လင်းသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါ့အခန်းထဲထိ အလင်းရောင် ဆင်းမလာခဲ့ဘူး။ မျက်နှာဖုံးတွေအတွက်က အလင်းရောင် မလိုပါဘူး။ အပျင်းဓာတ်ခံ ရှိပြီးသားပဲ။ သားကောင်တွေ ချနင်းတတ်ဖို့ပဲ လိုတယ်။ မနေ့ကတော့ မျက်နှာဖုံးတစ်ခုနဲ့ ငါ စကားနည်းနည်း ပြောဖြစ်တယ်။ သူက အရာရာကို ပေးဆပ်နိုင်ဖို့ သူ့မှာ အရာရာရှိနေဖို့ လိုတယ်တဲ့။ သူ နည်းနည်း စပ်စုလိုက်တယ်။ ပေးဆပ်နိုင်ပေမယ့် ပေးဆပ်ချင်စိတ် မရှိရင်ကော ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ ဆိုတော့ မျက်နှာဖုံးက တောင်တောင်အီအီ ပြောတယ်။ ပြည့်စုံခြင်းရဲ့ ငြီးငွေ့မှုကို မြင်းဟီသလို တစ်ချက်ထဟီတယ်။ သူက “ရော့” ဆိုပြီး ဓားနဲ့ ပစ်ပေါက်လိုက်တယ်။ မျက်နှာဖုံးက ခြေကားယားလက်ကားယားနဲ့ ရှောင်တယ်။ မင်းဓားပေါက်ခံနိုင်မှ သူများကို ပေါက်လို့ရမှာ ဆိုပြီး သူထွက်လာခဲ့တယ်။ သူ့ကြည့်ရတာ လိပ်တစ်ကောင်နဲ့ ပိုတူတယ်။ ဒါကြောင့် မျက်နှာဖုံးတွေဟာ လိပ်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက် အချိုးကျတယ်။
နောက်တော့ မျက်နှာဖုံးတွေရှိတဲ့ အရပ်မှာ ငါ့ကိုယ်ငါ ပြန်ပြီး ချိန်ခွင်ထဲ ထည့်ကြည့်တယ်။ အိုးးးး ကျပ်မပြည့်သေးဘူး။ အတ္တအချိုးအစား နည်းနည်း လိုနေသေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်ရက် နောက်တစ်ရက်နဲ့ နေ့ရက်တွေသာ ပြောင်းသွားတယ်။ မျက်နှာဖုံးတွေက ဟောင်းမသွားဘူး။ သားရဲတွင်းဆန်တဲ့ အမျှော်အမြင်တွေနဲ့ အတူ ဖုတ်ဖက်လူးပြီး သားရဲတွင်းထဲမှာပဲ ပျော်မြူးကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေက မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် ညစာစားကြတယ်။ မျက်နှာဖုံးတွေ အချင်းချင်း သတင်းလွေ့လွေ့ ပေါင်းဖက်ကြတယ်။ ငါ့ကိုလာမခေါ်လို့ ငါပျော်တယ်။ အဲဒါကြောင့် လူ့ကျင့်ဝတ်ထဲကို နှလုံးသွေးရောပြီး ငါ့ရင်ဘတ်ကို ငါစည်တီးမိတယ်။ ငါ့ရင့်ကျူးတဲ့ သံစဉ်က မျက်နှာဖုံးတွေအတွက် အစိမ်းဆန်တယ်။ ငါဟာ ကမ္ဘာဦး လူသားမျိုးနွယ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ငါ အမဲမလိုက်ခဲ့ဘူး။ အဲဒါကြောင့် ငါဟာ မစို့မပို့တော့ ငတ်ချင် ငတ်နေလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုရဲ့ ခန်နားထည်ဝါမှုကို အဖြူရောင်ပေါ်မှာ ဘောင်ခတ်ပြလိုက်တာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ညရဲ့ လကွေးလေးဟာ ငါ့အတွက် ဖြတ်ခနဲ လင်းသွားတယ်။ ငါဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိတယ်။ အဲဒါကြောင့် လကွေးလေးရဲ့ အလင်းနဲ့ ငါ့လမ်းငါခင်းပြီး နင်းတက်ခဲ့လိုက်တယ်။ စိတ်ကူးတွေရှိရာ…………. ။
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Sunday, September 18, 20119comments
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Thursday, September 15, 2011 11 comments
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Sunday, September 04, 2011 11 comments
"ကြိုက်၏မကြိုက်၏" တဲ့။ ကိုကြီးကိုမောင်လေး က တဂ်ထားတယ်။ ရေးမယ် ရေးမယ်ပေါ့လေ။ ဆိုတော့ကာ ကိုယ့်မှာလည်း ကြိုက်တာလေးတွေရော မကြိုက်တာလေးတွေရော ချရေးကြည့်လိုက်မိတယ်။ အဲဒီထဲကမှ တစ်ချို့အချက်လေးတွေကိုပဲ တင်လိုက်တော့မယ်။ ကြိုက်တာတွေ မကြိုက်တာတွေက သိပ်အများကြီးမရှိဘူးတော့ ထင်တာပါပဲ။ ကိုမောင်လေးရေးသလိုပဲ ရေးလိုက်တော့မယ်။
အရင်ဆုံးကတော့ ကိုယ်ခန္ဓာ ပေါ့လေ....
ဗလတောင့်တောင့် အဖုအထစ်တွေ မရှိပေမယ့် အဲလိုရှိတဲ့လူတွေကို အားကျပါတယ်။ အဲ ...... အဲလိုရှိချင်လား ဆိုတော့လည်း မရှိချင်ပြန်ဘူး :) ။ အသားမဲတဲ့လူတွေ ညိုတဲ့လူတွေအပေါ် ဘယ်လိုမှ မခံစားရပေမယ့် ကိုယ်ကတော့ နေပူထဲထွက်တာများလို့ အရောင်ပြောင်းရင် မကြိုက်ချင်တဲ့သူပေါ့ :) ။ အရပ်ရှည်တာကို နှစ်သက်ပေမယ့် ကိုယ့်လောက်ရှည်တာတော့ မကြိုက်ချင်ပြန်ဘူး :) ။ ၅ပေနဲ့ ၁၀လက်မလောက် ရှိမယ်ထင်တာပဲ :)။ အရမ်းပိန်ကပ်နေတာကို မကြိုက်ပေမယ့် ကိုယ်ကကို အဲလို ခပ်ပိန်ပိန်ရယ် :P ။ ဆံပင်ကတော့ အမြဲတန်း ခပ်တိုတိုပဲ ထားဖြစ်တယ်။ ဆံပင်ရှည်တွေကို နှစ်သက်တယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ထားခဲ့ဖူးတယ်။ ၂၀၀၄ လောက်တုန်းက ဆံပင်က ကျောလောက်နီးပါး ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဆံပင်ရှည်လာတော့ စိတ်ပိုရှုပ်လာသလို ခံစားရလို့ ပြန်တိုလိုက်တာ ဒီနေ့ထိပဲ။
ဘယ်နေရာပဲသွားသွား ဘေးဘီသိပ်မကြည့်တတ်ဘူး။ မတတ်သာလို့ကြည့်ရင်လည်း လမ်းကူးဖို့ ကားတို့ဆိုင်ကယ်တို့လောက်တော့ ကြည့်တယ်။ အဲဂလိုပေမယ့်လည်း အကွေ့မှာဝင်တိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ဘာတွေ လုံးဝလုံးဝ မရှိခဲ့ဘူး။ စိတ်ညစ်စရာပဲနော် :) ။ နောက်တစ်ခုက လက်…. ဘယ်နေရာထားရမှန်းကို မသိဘူး။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ဒီလက်က တော်တော်ရှုပ်တယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခုက ရယ်တဲ့အခါ တော်တော်ဂွကျရတယ်။ အူလှိုက်သည်းလှိုက်ရယ်ဖို့ ပါးစပ်ကို အကျယ်ကြီးဖွင့်ရမှာ နှမျောသလိုသလို ဘာလိုလိုနဲ့ လက်နဲ့ပိတ်ပိတ်ပစ်တတ်တာ... အဲဒါကိုက ဂွကျနေတာ :) ။
အမဲသားတော့ သိပ်မစားဖြစ်ဘူး။ တခြားဟာဆိုရင်တော့ ဆင်တဲကဖေးက သူငယ်ချင်း ပုံမှန်ရေးတဲ့ တွဲဖက်စားသုံးရန်မသင့်တဲ့ အရာတွေပဲ ရှောင်တယ် :)။ အထူးသဖြင့်တော့ အာလူးနဲ့ လက်ဖက်ကို ကြိုက်တယ်။ ဘာလိုလို ညာလိုလိုအသားတွေ စားမရဘူး။ ကြွက်တို့ ကြောင်တို့ ဖားတို့ ဘာညာကွိကွတွေပေါ့။ အိမ်ကလည်း မစားဘူး။ ကိုယ်တိုင်ကလည်းမကြိုက်ပေဘူးလေ :) ။ အဲ..ထွေလီကာလီ သုတ်တာလေးတွေတော့ ကြိုက်တယ်။ မြန်မာပြည်ကို အလည်ပြန်သွားတုန်းက ဆွမ်းဦးပုညရှင်ကို ရောက်တော့ ထမင်းဆိုင်မှာ ကြောင်လျှာပွင့်သုပ်တို့၊ တရုပ်စကားပွင့်သုပ်တို့ရတယ်လည်း ဆိုရော ကြိတ်လိုက်တာ ညနေမန္တလေး ပြန်ရောက်တော့ အစ်မရွှေစင်ဦးတို့ ဖိတ်ကျွေးတဲ့ ဟင်းပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ ညစာထမင်းကိုတောင် အနိုင်နိုင်စားယူရတယ် :) ။ အသားတွေထက် အရွက်တွေပိုကြိုက်တဲ့သဘောပေါ့။
လက်တို လုံးဝမကြိုက်ဘူး။ ပူမှဝတ်တယ်။ မပူရင် လုံးဝမဝတ်ဘူး :) ။ အထူးသဖြင့် လက်ရှည်ကို Alter Shirt လေးတွေ ပိုကြိုက်တယ်။ ဝယ်ထားသမျှလည်း အဲလိုတွေချည်းပဲ။ အရောင်ကတော့ အနက်၊ အဖြူနဲ့ မီးခိုးရောင် ခပ်မှိုင်းမှိုင်းတွေ ဝယ်ဖြစ်တယ်။ နောက် Jean Pant ကို သိပ်ကြိုက်တယ်။ စတိုင်ကတော့ ဒေါက်ပျောက်လောက်ပဲ ဝယ်ထားတယ်။ သိပ်လည်းမကြိုက်တော့ သိပ်လည်းမဝတ်ဖြစ်ပါဘူး။ ထူးထူးရှယ် ကြိုက်တာကတော့ ဦးဂျမ်းပုဆိုး အကွက်စိပ်လေးတွေပါ။ အိမ်ပြန်ရင် အဖေက အသစ်လေးတွေ ဝယ်ထားတယ်။ သားလေးပြန်လာရင် ဝတ်ဖို့တဲ့။ အရောင်လေးတွေက ကျနော့်အကြိုက်တွေချည်းပဲ :) ။ အဲဒါကြောင့် ကျနော့်အဖေဖြစ်နေတာနေမှာ :) ။ ဒီနေရာမှာတော့ ကိုဂျီးကိုမောင်လေး နဲ့ တော်တော်တူတယ်ပြောရမယ် :) ဦးဂျမ်းကြိုက်တာခြင်းပေါ့။ မြန်မာဖိနပ်ဆိုရင်တော့ အောကတီပါ ဇီးရောင်ပေါ့။ ဂျင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ All Star ကိုကြိုက်တယ်။ ကိုယ်က မင်းသားလည်း မဟုတ်တော့ အဲဒီလောက်ပဲ ဆင်ဖြစ်တယ်လေ :) ။
ကဲ…ကိုမောင်လေးရေ...ကြိုက်၏မကြိုက်၏ တွေကတော့ တတ်သလောက်မှတ်သလောက် ဒါအကုန်ပဲဗျို့ :) ။ အဲဒါကတော့ အနှီမောင်ဖိုးကြယ်ရဲ့ ရှိတာအကုန်ထုတ်ကြွားရခြင်းပါ။ ဒါပါပဲ….တော်သေးပြီ :P ။
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Wednesday, July 27, 2011 8 comments
ခရီးသွားမှတ်တမ်း [ ၁ ] - ရွှေကျောင်းတော်
ပြီးခဲ့တဲ့လက အလည်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ အလည်ဆိုတော့ လည်တာပေါ့။ သွားတယ် ရောက်တဲ့နေရာ စားတယ်။ နောက်ထပ် ထပ်သွားတယ် ထပ်ရောက်တယ်။ ခုတော့တင်လိုက်တော့မယ် :)။ မေးတဲ့သူတွေက မေးကြတယ်လေ။ ဘာမှမတင်ဘူးလားတဲ့။ ရိုက်လာတဲ့ ပုံတွေတင်မယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်တယ်။
ကဲ.....တင်ပါပြီ :) ။
ဒါကတော့ ဂုဏ်ယူစရာ မန္တလေးက ရွှေကျောင်းတော်ကြီးပါ။ ခမ်းနားလှတဲ့ အနုလက်ရာတွေ ၊ နောက် ရှေးမြန်မာ ဗိသုကာပညာရှင်တွေရဲ့ ညာဏ်ပညာ ထက်မြက်ပုံတွေ [ ရှေးမြန်မာတွေနော် :) ] နောက် မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဘာသာတရားအပေါ်ထားတဲ့ ဒါန.... ။
တံခါးတွေ မင်းတုန်းတွေမှာ သံမသုံးပဲ စရွေးကိုက် အပေါက်ဖောက်ပြီး ထည့်ထားတယ်။ အို.....ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပါပဲ... :)
ဒါကတော့ ရာဇဝင်ထဲက နေရာလေးပါ ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပုံတွေထဲမှာ တွေ့ဖူးနေကြ နေရာလေးမို့ ရိုက်လာခဲ့တယ်။
ရွှေကျောင်းတော်ကြီး ဆိုတဲ့အတိုင်း ရွှေတွေပိန်းနေအောင်းချထားခဲ့တာ ခုတော့ရသလောက် ကျန်သလောက် ကလေးကိုပဲ ရိုက်လာခဲ့ရတယ်....ဝမ်းနည်းစရာပဲ။ သေခြာကြည့်နော် ပြူးပြီးသာကြည့် မြင်ရလိမ့်မယ် :) ။
ဒါကတော့ ကျောင်းရဲ့အောက်က နေရောင်ကျနေတာ တစ်မျိုးလေးလှလို့ရိုက်လာတာ။
ဒီကျောင်းကြီးကို မန္တလေးက Blogger အစ်မရွှေစင်ဦးနဲ့ မစည်းစိမ် တို့လိုက်ပို့ပေးခဲ့တာပါ။ ကျေးဇူးပါအစ်မတို့ :)။ အခုပိုစ့်ကတော့ ခရီးသွားမှတ်တမ်းအစပေါ့။ နောက်ဆို Europe တို့ UK တို့ရောက်ရင်လည်း ရေးတင်ပါ့မယ်။ ဘယ်တော့လည်းတော့မမေးပါနဲ့ :) ။
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Thursday, July 21, 20114comments
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Saturday, May 28, 20113comments
စင်ကာပူရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် စာပေဟောပြောပွဲ (2010) တုန်းက ဆရာမောင်စိန်ဝင်းက ကဗျာတွေရွတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ခုတတိယအကြိမ်လည်း သွားနားထောင်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာမောင်စိန်ဝင်း ရဲ့ ကဗျာလေးကိုတော့ ဒီနေ့ထိ စွဲနေတုန်းပဲ။ ဆရာကဗျာရွတ်တုန်းကလည်း နားထောင်ရင်း ရင်ထဲမှာ လှိုက်ခနဲ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီကဗျာလေးကို အမှတ်တရအနေနဲ့ရော မျှဝေချင်တဲ့အတွက်ပါ blog လေးပေါ်မှာ အတူတူခံစားကြရအောင်ပါ ။
ငှက် ဆိုတာက ပျံရင်းသေ
အဲဒါအဲဒါ ငှက်တို့ရဲ့သမိုင်း ။
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Friday, May 06, 20114comments
လူ = ရေ
ဘာလိုလိုနဲ့ပေါ့ ဒီမှာနေတာ ၄နှစ်ပြည့်တော့မယ် ။ ဆိုတော့ကာ ဟိုနေ့ကပဲ ဆက်ပြီးနေထိုင်ဖို့အတွက် company နဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးတဲ့ သကာလ စာအုပ်ဝယ်ဖို့လုပ်ရပါတော့တယ် ။ ဘာစာအုပ်လဲလို့ မမေးပါနဲ့ဦး ။ နောက်တော့ပြောပါ့မယ် ။ ဒီလိုပါ အဲဒီစာအုပ်ကလေးက မရှိမဖြစ်ဆိုပါတော့။ သူက တော်တော်လေးအရာရောက်ပါတယ် ။ သူ့ကိုဝယ်ဖို့ တော်တော်လေးလည်း အလုပ်ရှုပ်ရပါတယ် ။ စိတ်လည်းရှည်ရပါတယ် ။ ဈေးလည်းတော်တော်လေးကို ကြီးပါတယ် ။ တစ်ခါဝယ်ဖို့အရေး တန်းစီရတာကို တော်တော်ကြာပါတယ် ။ လူတွေများလွန်းလို့ စီထားတဲ့ လူတန်းကြီးဟာ စာအုပ်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်အပြင်ကိုတောင် ရောက်ပြီး ကွေ့ကာဝိုက်ကာနဲ့ကို သွယ်တန်းနေပါတော့တယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတွေက အဲဒီစာအုပ်ကလေးရဲ့ တန်ဖိုးကျသင့်ငွေလေးတွေကို [ ငွေလေးလို့ပြောတာမကျေနပ်ရင် ငွေကြီးလို့ပြောင်းဖတ်လို့ရပါကြောင်း :) ] ဆုတ်ကိုင်ထားကာ မရှည်တဲ့စိတ်ကို ဆွဲဆန့်ပြီး ရှည်အောင်ကိုစောင့်နေကြပေါ့ ။ အဲဒီလူတန်းကြီးမှာ အနှီမောင်ဖိုးကြယ်လည်း အပါအဝင်ပါ ။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ရွေ့ရွေ့နဲ့ ချီတက်လာလိုက်တာ မောင်ဖိုးကြယ်ရှေ့မှာ နှစ်ယောက်ပဲလိုတော့တယ်ခင်ဗျ ။ နဲနဲလည်းဝမ်းသာစပြုနေပါပြီ ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ မောင်ဖိုးကြယ် ဘွားခနဲ မြင်လိုက်တာတစ်ခုကြောင့် ရီရမလို ငိုရမလိုတောင်ဖြစ်သွားရပါတယ် ။ သေသေခြာခြာထပ်ကြည့်ပါတယ် ။ မှားနေမှာစိုးလို့ပါ ။ ဟုတ်ကဲ့ မမှားပါဘူး သေသေခြာခြာ ကိုမှန်ပါတယ် ။ အဲဒါနဲ့ blog မှာစာလာဖတ်တဲ့ ထောင် သောင်း သိန်း သန်း သောပရိသတ်ကြီးအား :) မျှဝေလိုဇောနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူလာခဲ့ပါတယ် ။ ရိုက်ထားတာက ကွယ်ကာဝှက်ကာ ဆိုင်ရှင်တွေမမြင်အောင် ရိုက်ခဲ့ရတာဆိုတော့ နဲနဲ ဝါးတားတား ဖြစ်နေပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အရှင်းကြီးပါ ။ မြင်သူတိုင်း နှစ်ခါကြည့်စရာမလိုပါဘူး :) ။
နောက်တော့ မောင်ဖိုးကြယ် အလှည့်ရောက်လို့ လက်ထဲက ကိုင်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံကို မပေးချင်ပေးချင်နဲ့ ပေးပြီး အဲဒီစာအုပ်အနီရောင်လေးကို ယူလာခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ဆုံးတော့ ရခဲ့ပါပြီ ။ ဒါပေမယ့် မြင်ခဲ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် မအီမလည်ကြီးတော့ ဖြစ်သား :) ကြည့်ကြပါကုန် ပရိတ်သတ် :) ။
အနှစ်ချုပ်ဆိုရသော်....လူသည်ရေနှင့်တူ၏ ၊ ရေသည်ငွေနှင့်တူ၏ ဆိုသော် ကန်သည် မည်သည့်အရာနှင့်တူပါသနည်း :))) ။
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Saturday, February 19, 2011 8 comments
ဒီနေ့လေးပေါ့ ခင်မင်ရတဲ့ blogger တစ်ယောက်နဲ့ online မှာတွေ့တော့ သူက ဝဲစွဲနေလား ဖိုးကြယ်တဲ့ ။ အဲဒီကြမှပဲ အနှီမောင်ဖိုးကြယ်လည်း ဝဲစွဲမစွဲ စစ်မိတော့တယ်။ သိပ်တော့မများပါဘူး တစ်ခုထဲပါ :) ။ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေရဲ့ link တွေတော့ ခဏဖြုတ်ထားလိုက်ရတယ်။ ထပ်စစ်ကြည့်တော့ ရှိနေသေးတယ်။ template မှာ ချိတ်ထားတဲ့ recent comment မှာသွားတွေတယ်။ အဲဒါနဲ့ ထပ်ဖြုတ်လိုက်တော့မှ လားလား ရသွားတော့တယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝဲကတော့ ရှင်းသွားပါပြီ :) ။ သတိပေးပြီး ကူညီပြောပြပေးတဲ့ blogger မြတ်မွန် ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါ၏ ။ နောက်ကြုံရင် ဘာစားချင်လည်းပြောပါ ။ တကယ်ဝယ်မကြွေးရတဲ့အတွက် စိတ်ကြိုက်သာပြောပါ အားမနာပါနဲ့ :) ။
စွဲနေတဲ့ ဝဲအတွက်တော ဒီမှာ သွားပြီး ဖတ်လိုက်ပါ။ လွယ်ပါတယ် ။ မခက်ပါဘူး ။ ကျွန်တော်ကိုတော့ သူများပြောပြလို့သိတာပါ :) ။
blogger အပေါင်း ဝဲကင်းစေကြောင်းပါ :) ။
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Saturday, February 12, 20110comments
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Friday, February 04, 20113comments
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Sunday, January 30, 20114comments
ဒီနေရာလေးမှာပဲ မျက်ရည်တွေ ခ မိပြန်ပြီ....။
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Sunday, January 23, 20115comments
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Wednesday, January 19, 20114comments
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Sunday, January 09, 2011 8 comments
ညနေခင်းလေးရဲ့ ကြိုဆိုသံက သူ့ ရင်ကို လှုပ်ခပ်နေလေရဲ့။ဒီနေ့ဟာ ဒီနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့။ သူခေါ်နေတယ် အမြန်သွားပါ။ ကားဂိတ်မှာ တစ်ယောက်ထဲတဲ့။ ခြေလှမ်းတွေက မြန်လိုက်တာ စိတ်နဲ့အတူတူပြေးနေလေရဲ့။ ကျေးဇူးပြုပြီး လမ်းနဲနဲပေးပါ။ ဒီခုန်မှာထိုင်လို့ရမလား။ ခြေထောက်ကိုတက်နင်းသွားတယ်။ ရပါတယ် နာလည်းခဏပေါ့။ ကားကနှေးလိုက်တာ မြန်မြန်မောင်းလို့မရဘူးလား။ မီးနီနေတာကြာတယ်။ မြန်မြန်စိမ်းပါတော့။ ချစ်သူကစိတ်ကောက်ခဲတယ်။ကောက်ရင်လည်း မလွယ်ဘူးဆိုတာ ငါသိတယ်။
ဟော.....ရောက်ပြီ။ သူဘယ်မှာလဲ လရိပ်ထဲမှာ ပုန်းနေတာလား။ ဟော....တွေ့ပြီ ။ ပိုးစိုးပက်စက်လှနေတယ် အရာရာတိုင်းက။ ကောက်ချင်ယောင်ဆောင်နေတော့ ဖြောင့်ရခက်တယ်။နောက် သူ ရယ်နေတယ်။ မျက်နှာလေးက ချစ်စရာလေး။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီဘက်နဲနဲတိုးနော်။ လက်ကလေးတစ်ဘက် လာချိတ်တယ်။ အဲဒီအချိန် ကားကြီးတစ်စင်းထိုးဆိုက်လာတယ်။ တွဲလောင်းကြီးဆွဲထားတယ်။ အပြုံးတွေနည်းနည်း ကျဲပြီး တက်ခဲ့လိုက်တယ်။ ကြာလိုက်တာ မြန်မြန်မလာဘူးတဲ့။ ကဲ...ဘယ်သွားကြမလဲဆိုတော့ နှင်းမှုန်တွေမရှိပဲ ဆောင်းရာသီယောင်ဆောင်ထားတဲ့ နှစ်သစ်ကူး နန်းတော်ကိုတဲ့။ ချစ်စဖွယ်ကောင်မလေးပဲ။ အနမ်းလေးခပ်ဖွဖွပေးလိုက်တယ်။ သိမ်းထားနော်။
ဖုန်းကငှက်ဆိုးတွေ ရင်ကွဲသံနဲ့ ထ ပြီးမြည်တယ်။ ငါတို့ အဖုံးတွေဖွင့်ထားတယ်တဲ့။ တံခါးက ၅ပေကျယ်တယ်။ တစ်ကိုယ်စာတော့ ချောင်ချောင်ချိချိပဲတဲ့။ အော်...ဒါနဲ့မင်းတစ်ယောက်ထဲလား။ အော်....နှင်းတွေနဲ့အတူ ကနေတာပဲကိုး တဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဖုံးတွေဖွင့်ထားလိုက်မယ်နော်တဲ့။သူ နာရီကိုကြည့်တော့ ၁၁နာရီ ၄၅ တဲ့။ မြန်လိုက်တာ နာရီက မြင်းတစ်ကောင်ကို ခွစီးထားသလိုပဲ။`' happy new year နော် ကို `' တဲ့။ အင်း နောက်ကျနေပြီပဲ။မျက်စိတစ်ဆုံးထိလိုက်ပို့လိုက်တယ်။ ကားဘယ်မှာလဲ...မြန်မြန်လာပါ။ အဖုံးတွေဖွင့်ထားတယ်တဲ့။ အဲဒီအချိန် ဖုန်းက ထ ပြီးမြည်ပြန်တယ်။ ဘယ်မှာလဲ....... အဖုံးတွေ ဖွင့်ထားတာကြာတော့ အငွေ့တွေပြန်ကုန်တယ်တဲ့။ အဲဒါတော့ သူဝမ်းသာတယ်။ အငွေ့ပြန်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ အင်း လာပြီ အမြန်ဆုံးပဲနော်။ HAPPY NEW YEAR........ ဟင်....... နာရီက ၁၂ နာရီမှာ မားမားရပ်ပြနေတယ်။ ကဲပါ...အငွေ့ပြန်တာကြာပြီပဲ သူမရှိလဲ အဖုံးတွေဖွင့်ထားတာပဲ။ သူခေါင်းကို နောက်မှီချလိုက်ပြီး မျက်လုံးတွေမှိတ်ချလိုက်တယ်။ မျက်နှာလေးတစ်ခု။ အပြုံးလေးတစ်ခု တောင်ချိတ်ထားသေး။ မျက်နှာလေးနဲ့အတူ သူနှစ်ကူးလိုက်တယ်။ တစ်ကယ်တော့ ဒါဟာ နှစ်ယောက်အတူတူကူးခဲ့တဲ့ တစ်ပါးသွားနှစ်ကူးပေါ့။
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Sunday, January 02, 20117comments